Cadillac ရဲ့ CT 4V နဲ့ CT 5V တို့ကို အရင်ဆုံးဝယ် ယူမယ့် သူတွေ အတွက် အထူးအခွင့်အရေး! – MyMedia Myanmar
Cadillac ရဲ့ CT 4V နဲ့ CT 5V တို့ကို အရင်ဆုံးဝယ် ယူမယ့် သူတွေ အတွက် အထူးအခွင့်အရေး!
Cadillac အနေနဲ့ကတော့ သူတို့ရဲ့ Brand ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး အခြားသော ကုမ္ပဏီများ နည်းတူ လျှပ်စစ် စွမ်းအင်သုံး ဘက်ကို ‌ကူးပြောင်း နေပြီလို့ပဲယူဆရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ All-Electric Flagship Sedan အမျိုးအစားအတွက် Brand အခွဲ တစ်ခု အနေနဲ့ Celestiq ကိုတည်‌ထောင်ထားလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကားအပိုင်းကိုစိတ်အားထက်သန်၊ စိတ်ဝင်စားမယ့် သူတွေအတွက် ကို ပိုပြီးထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အတွက် Cadillac ဘက်ကနေ ချပြသွားဖို့ ရှိနေပါသေးတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ် တုန်းကပဲ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ Cadillac ဟာ သူတို့ရဲ့ CT 4-V Blackwing နဲ့ CT 5-V Blackwing တို့ကို အစီးရေ အကန့် အသတ် နဲ့ပဲ ရောင်းချတော ့မယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပြီး အမျိုးတစ်မျိုးကို အစီးရေ ၂၅၀ အထိပဲ အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ စွမ်း ဆောင်ရည်မြင့် ကားအမျိုးအစား ကောင်းတွေအတွက် အစောဆုံး ဝယ်ယူမယ့် သူတွေဟာ မူလရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးတွေတင် မကသေးပဲ အခြားသော ထူးခြားတဲ့ အခွင့် အရေးတွေ ကိုပါ ထပ်မံ ရရှိနိုင်ဦးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ GM Authority ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သိရပါတယ်။
အခု သတင်း ဖော်ပြချက်အရတော့ အဆိုပါ ကားမော်ဒယ် နှစ်မျိုးလုံးပေါင်း ကန့်သတ်ထုတ်လုပ် ပေးမယ့် ကားအစီးရေ ၅၀၀ ကို ဝယ်ယူ မယ့်သူတွေဟာ အခြားသော ဝယ်ယူသူတွေ မရရှိနိုင်မယ့် သီးသန့် Freebies ဝန်ဆောင်မှု ၃ မျိုးကို ရရှိမယ် လို့လည်း သိထားရပါတယ်။ အဆိုပါ ၃ မျိုးထဲက ပထမဆုံးကတော့ Serial Number တွေအစဆုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး Certificate Of Authenticity ဆိုတဲ့ စစ်မှန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်ကိုပါ အထူးအနေနဲ့ ထုတ်ပေးထားဦးမှာပါ။ အဆိုပါကားတွေရဲ့ သက်တမ်းတွေ ကြာမြင့်လာတာ နဲ့ အမျှ အခုလို ထူးခြားတဲ့ အမှတ်အသားတွေ ဟာ Blackwing ပိုင်ရှင် တွေ အတွက် အတော်လေးကို တန်ဖိုးမြင့်တက် လာစေမယ့် သဘောလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Certificate နဲ့ Serial Number ပါဝင် တဲ့ အချက်အပြင် အစောဆုံး ဝယ်ယူသူတွေ အနေနဲ့ နီဗားဒါး ပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ Spring Mountain Resort က Cadillac V-Performance Academy မှာလည်း စာရင်းသွင်း ပေးတာကို လက်ခံ ရရှိဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာ မှာတော့ Spring Mountain Resort ဆိုတာ ကတော့ ၆ မိုင် အကွာအဝေး ပမာဏလောက် အထိရှိတဲ့ လမ်းမျိုးစုံ မောင်းနှင်နိုင်မယ့် ကား မောင်းကွင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ လေ့ကျင့်ရေး ကားမောင်းကွင်းမှာ မောင်းနှင်လေ့ကျင့်ခွင့် ရလိုက်တဲ့ အတွက် ယာဉ်မောင်းတွေရဲ့ မူလ အရည်အချင်းတွေ အပြင် အခြား အမျိုးမျိုး သော အတွေ့ အကြုံတွေမှာပါ ပိုပြီး သိသိသာသာ တိုးတက်လာစေမယ့် အခွင့်အရေး တစ်ရပ် ကိုလည်း ရရှိလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး ဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာလည်း ကောင်းတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ကတော့ Cadillac ဟာ အဆိုပါ ပထမဆုံး အစီး ရေ ၅၀၀ ရဲ့ ပိုင်ရှင် တွေဆီကို လက်ဆောင်တွေ ထည့်ပေး လိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့ GM Authority က ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါ ထည့်သွင်း ပေးလိုက်မယ့် လက်ဆောင်ဆိုတာ ကတော့ တကယ့်ကို လျှိ့ဝှက်လွန်းနေပြီး အခုထိဘာဆိုတာ မသိရှိ ရသေးပေမယ့် သတိပြုရမယ့် တစ် ချက် ကတော့ GM အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Patrons တွေဆီကို ပေးခဲ့တဲ့ လက်ဆောင် နဲ့ ပြန်ပြီး နှိုင်းယှဉ် စဉ်းစား ကြည့်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။အဆိုပါ လက်ဆောင်ကတော့ C 8 Corvette ရဲ့ ပုံစံ တူ ထုတ်လုပ် ပေးထားတဲ့ Model တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ဖော်ပြခဲ့တဲ့ လက်ဆောင် ၃ ခုစလုံးကို အခု သတင်း တင်ဆက်တဲ့ အချိန် ထိ အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးတာ ကြောင့် သိပ်ပြီး စိတ်မလှုပ်ရှား ဖို့တော့ လိုအပ် ပါသေး တယ်။ အဆိုပါ အချက်အလက်တွေ အပါအဝင် အခြားသော စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ အရာတွေ ကိုလည်း Cadillac CT 4-V နဲ့ Cadillac CT 5-V Blackwing Models တွေ နဲ့ အတူ ထုတ်ဖော် လာတော့မှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကားတွေကိုတော့ လာမယ့် ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ လ ၁ ရက်နေ့ ၇ နာရီ EDT Livestream Event မှာ ချပြတော့မှာ ဖြစ်လို့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါ။
The post Cadillac ရဲ့ CT 4V နဲ့ CT 5V တို့ကို အရင်ဆုံးဝယ် ယူမယ့် သူတွေ အတွက် အထူးအခွင့်အရေး! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-18T14:00:38+06:30January 18th, 2021|MYCARS MYANMAR|